Mi 8 နှင့်အတူ MIUI 10 ကို မေလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်မယ်
23 May 2018 . 6:48 PM
မနေ့က Xiaomi ရဲ့ Weibo အကောင့်မှာ ၄င်းတို့ရဲ့ ၈နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ Mi 8 လို့ယူဆရတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို မိတ်ဆက်မယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်၊ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ Mi 8 အပြင် နှစ်စဉ် Update လုပ်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ MIUI Version အသစ်ကိုပါ မိတ်ဆက်သွားမယ်လို့ ထပ်ဆင့်ကြေညာခဲ့ပါ။
အခုတစ်ခေါက် မိတ်ဆက်မယ့် MIUI Version ကတော့ 10 ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာမြင်ရတဲ့ အရောင်စုံ နဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ နံပါတ် ၁၀ ရဲ့အောက်မှာ “I will be faster than lightning” ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ ပွဲကျင်းပနဲ့ နေ့ရက်နဲ့ တည်နေရာတို့ကို တရုတ်ဘာသာနဲ့ ထည့်သွင်းရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သဘောကတော့ အရင် MIUI9ထက်တောင်ပိုပြီးမြန်ဆန်တဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေပါဝင်လာမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီပုံအပြင် မနေ့က တင်ခဲ့တဲ့ ပိုစတာမှာလည်း “I am Mi 8 and I will be faster than ever” ဆိုတဲ့စာသားကိုထည့်သွင်းခဲ့သလို အခုမိတ်ဆက်မယ့်ဖုန်းအသစ်ဟာ UI ပိုင်းမှာလည်း ယခင်မြင်နေကျပုံစံတွေနဲ့မတူတော့ဘဲ အသွင်သစ်အမြင်သစ်နဲ့ အသုံးပြုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
MIUI 10 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Feature အသစ်တွေရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို မကြာခင်မှာ မြင်တွေ့နိုင်ဖွယ်ရှိပြီး ကျွမ်းကျင်သူတချို့ကတော့ Android OS Oreo ပေါ်မှာ အခြေခံထားတယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် MIUI 10 ကိုအစောဆုံး အသုံးပြုနိုင်မယ့် ဖုန်းတွေဟာ Android Oreoe Version ကိုအခြေံခံထားတဲ့ ဖုန်းတွေဖြစ်နိုင်ပြီး တခြား Version နိမ့်တဲ့ဖုန်းတွေကတော့ ရရှိနိုင်မယ့် Feature တွေကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ကဲဘယ်လိုလဲ Mi 8 ထက် MIUI 10 ကိုပိုစိတ်ဝင်စားနေပြီမလား ?
Mi 8 နှငျ့အတူ MIUI 10 ကို မလေ ၃၁ ရကျနမှေ့ာ မိတျဆကျမယျ
မနကေ့ Xiaomi ရဲ့ Weibo အကောငျ့မှာ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ ၈နှဈမွောကျနှဈပတျလညျအထိမျးအမှတျအနနေဲ့ Mi 8 လို့ယူဆရတဲ့ စမတျဖုနျးတဈလုံးကို မိတျဆကျမယျလို့ ကွညောခဲ့ပါတယျ၊ နောကျဆကျတှဲအနနေဲ့ Mi 8 အပွငျ နှဈစဉျ Update လုပျပေးနကေဖြွဈတဲ့ MIUI Version အသဈကိုပါ မိတျဆကျသှားမယျလို့ ထပျဆငျ့ကွညောခဲ့ပါ။
အခုတဈခေါကျ မိတျဆကျမယျ့ MIUI Version ကတော့ 10 ဖွဈပါတယျ။
ပုံမှာမွငျရတဲ့ အရောငျစုံ နဲ့ရေးဆှဲထားတဲ့ နံပါတျ ၁၀ ရဲ့အောကျမှာ “I will be faster than lightning” ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ ပှဲကငျြးပနဲ့ နရေ့ကျနဲ့ တညျနရောတို့ကို တရုတျဘာသာနဲ့ ထညျ့သှငျးရေးသားထားတာဖွဈပါတယျ။ သဘောကတော့ အရငျ MIUI9ထကျတောငျပိုပွီးမွနျဆနျတဲ့ စှမျးဆောငျမှုတှပေါဝငျလာမယျလို့ပွောခငျြတာဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီပုံအပွငျ မနကေ့ တငျခဲ့တဲ့ ပိုစတာမှာလညျး “I am Mi 8 and I will be faster than ever” ဆိုတဲ့စာသားကိုထညျ့သှငျးခဲ့သလို အခုမိတျဆကျမယျ့ဖုနျးအသဈဟာ UI ပိုငျးမှာလညျး ယခငျမွငျနကေပြုံစံတှနေဲ့မတူတော့ဘဲ အသှငျသဈအမွငျသဈနဲ့ အသုံးပွုရလိမျ့မယျလို့ဆိုထားပါတယျ။
MIUI 10 နဲ့ပတျသကျတဲ့ Feature အသဈတှရေဲ့ အသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေို မကွာခငျမှာ မွငျတှနေို့ငျဖှယျရှိပွီး ကြှမျးကငျြသူတခြို့ကတော့ Android OS Oreo ပျေါမှာ အခွခေံထားတယျလို့သုံးသပျထားကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ MIUI 10 ကိုအစောဆုံး အသုံးပွုနိုငျမယျ့ ဖုနျးတှဟော Android Oreoe Version ကိုအခွေံခံထားတဲ့ ဖုနျးတှဖွေဈနိုငျပွီး တခွား Version နိမျ့တဲ့ဖုနျးတှကေတော့ ရရှိနိုငျမယျ့ Feature တှကှောခွားနိုငျပါတယျ။ ကဲဘယျလိုလဲ Mi 8 ထကျ MIUI 10 ကိုပိုစိတျဝငျစားနပွေီမလား ?